Cunsuriyiinta Finland: Soomaalida iyo Qaniisiinta Åland ha la dajiyo | Somaliska
Mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga cunsuriga ah ee True Finns kaasoo ka dhisan dalkaasi Finland ayaa dhaliyay qaylodhaan ka dib markii uu ku baaqay in soo galootiga qaasatan Soomaalida iyo qaniisiinta la dajiyo jasiirada xorta ah ee Åland.
Ninkaan oo lagu magacaabo Teuvo Hakkarainen ayaa mar uu siinayay wareysi wargeys ka soo baxa Finland ayuu ku yiri “Aan u rarno Soomaalida iyo qaniisiinta xagaas ka dibna aan fiiro bulshada nuuca ay dhisaan”. Hadalka ninkaan ayaa dhaliyay dood weyn iyadoo gudoonka xisbiga True Finns ay sheegeen in hadalkaas uu u muuqdo kaftan.
Ninkaan ayaa horey loogu qabsaday dhowr jeer markii uu hadalo cunsuriyad ku dhisantahay warbaahinta ka jeediyay. Xisbiga True Finns (Sannfinländarna) ayaa doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Finland ka helay qeyb weyn. Waa xisbi ka soo horjeeda soo galootiga.